Netpeak Checker: SEO Nnukwu Nyocha na Nkpọrọgwụ Ngalaba na Peeji | Martech Zone
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 11, 2019 Tuzdee, Machị 31, 2020 Douglas Karr
Nyaahụ, ezutere m usoro mmemme na-agwa m ka m nyere ha aka ịzụ ụmụ akwụkwọ ha na njikarịcha nchọta ihe. Ajụjụ mbụ m jụrụ bụ:
Kedu ihe ị chere SEO bụ?
Ọ bụ ajụjụ dị mkpa n'ihi na azịza ya ga-eduzi ma m nwere ike ịnwe enyemaka. Obi dị m ụtọ, ha zara na ha enweghị ọkachamara ịza ajụjụ a ma dabere na ihe ọmụma m. Nkọwa m banyere SEO dị mfe n'oge a.
Ihe SEO B NOTGH.
Nchọpụta njikarịcha nchọta abụghị echiche mkpokọta nke otu njikarịcha ọchụchọ.
Nchọpụta njinchọ nchọgharị abụghị injinịa nke ngalaba ikike iji nwaa ịtụgharị algorithms ka ọ dị mma.
Nchọpụta njin nchọgharị anaghị emegharị ma ọ bụ imepụta ọdịnaya iji ghọgbuo igwe nchọ na ogo ya.
Ihe ochicho njini Search adighi aga n’ihu na-ario saiti ndi ozo maka njikọ azu.
Ihe ndị a niile elebara anya na igwe nchọta ihe ọ bụghị na onye ọrụ ọchụchọ.
Ihe SEO bu: njikarịcha njirimara Onye Ọrụ
Ihe ochicho njini Search bu ihe mgbe ochie ma choro ka ewepu ya n’onu okwu ahia dijital. Algọridim ọchụchọ na-ahụ, na-ewe, ma jiri amamihe na-enye nsonaazụ dabere na ọchụchọ ahụ onye ọrụ'omume. A na-emelite algọridim ahụ dabere na omume onye ọrụ na-aga n'ihu ịgbanwe.
Nke ahụ pụtara na atụmatụ gị ga-aga n'ihu na-agbanwe ma bụrụ nke kachasị oge. Ọ bụ ya mere na peeji nke ọsọ na mobile Respiveness e-akwọ ụgbọala ogo na-adịbeghị anya… n'ihi na ọrụ dị na mobile ngwaọrụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enwe nkụda mmụọ na a ngwa ngwa na saịtị!
Ọ bụrụ n ’ị ga - eme njikarịcha Nchọgharị Ndị Ọrụ, ọ bụ maka nyocha ị nwere ike ịnakọta na ndị na - ege gị ntị na asọmpi gị. SEO ngwaọrụ gaa n'ihu na-emeziwanye ma na-enye gị ọtụtụ ihe nyocha iji chọpụta gị ọdịnaya nke na-akpali mmasị ka ị wee nwee ike iwulite usoro ka mma iji zụlite, dee, chepụta, ma kwalite ọdịnaya nke ga-emeri igwe nyocha ahụ onye ọrụ.
Netpeak Checker: Nnyocha Ngwaọrụ maka SEO
Otu ngwa ọrụ riri ewu ewu bụ Nyocha Netpeak, Ngwá ọrụ nyocha sitere na Netpeak Software nke na-enye nghọta na ihe karịrị 384 parameters jikọtara na ngalaba ma ọ bụ ibe weebụ. Ọ bụ ngwa desktọọpụ nke na-enyere ndị ọkachamara njikarịcha nchọta dị elu na atụmatụ ndị a:
Lelee akụkụ 380 + nke ọtụtụ URLs
Mechie nsonaazụ ọchụchọ Google, Bing, na Yahoo
Nchọpụta backlink profaịlụ na weebụsaịtị maka ịdị mma njikọ ụlọ
Tụlee URL site na oke nke ọrụ ndị ama ama: Ahrefs, Moz, Serpstat, Ebube, Semrush, Wdg
Nyochaa ndị asọmpi gị
Nyochaa ngalaba afọ, ụbọchị njedebe, na nnweta maka ịzụta
Tụlee ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ media arụmọrụ
Jiri ndepụta nke proxies na captcha ọrụ ọrụ mgbe ị na-arụ ọrụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke URLs
Chekwaa ma ọ bụ bupu data iji rụọ ọrụ na ya mgbe ọ bụla ịchọrọ
A na-akwado sọftụwia ugbu a na Windows yana nsụgharị MacOS na Linux na-abịa n'oge adịghị anya.
Gbalịa Netpeak Software
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta maka Netpeak Sọftụwia na post a.
Tags: netpeak nyochanetpeak ngwanrọomume ọchụchọnyocha nyochaagwoọnyà crawlerya